Gumi nembiriSouth inotangisa yekutanga rundarira kuisa iyo Apple Watch, iyo ActionSleeve | Ndinobva mac
Gumi nemaviriSouth inotangisa yekutanga rundarira kupfeka iyo Apple Watch, iyo ActionSleeve
Iyo TwelveSouth kambani inozivikanwa nevazhinji vashandisi kune yayo yakawanda nhamba yezvishandiso zvinowanika kune ese maApple zvishandiso uye nehunhu hweizvi. Zvino apo iyo CES muLas Vegas (Consumer Elektroniki Show) ye2017 iri kubatwa, vafunga kuvhura bracelet yekuisa iyo Apple Watch nekutamba mitambo yatinoona ichinakidza chaizvo. Zvakare iyi bracelet nyowani inonzi ActionSleeve, ndiyo ichave yekutanga kuwanikwa neaya maficha akanyatsogadzirirwa iyo Apple Watch Uye chokwadi ndechekuti tinozviona zvichishamisa tichitarisa huwandu hwezvinhu izvo zvatiinawo zvakafanana zvema Smartphones uye hapana chakagadzirirwa wachi.
Ichi ndicho vhidhiyo diki yakagadzirwa neTwelveSouth mauri iwe kuona kushanda kweichi chitsva bracelet kana ruoko rundarira rweApple smart smart:
Iri rundarira rinokwana zvakakwana muApple Watch yedu uye rinotibvumidza kutora mafambiro ese nekuda kwema sensors ewachi pamwe nekutora chiyero chemwoyo kuburikidza nema sensors ezasi. Iyo bracelet ine maviri akasiyana saizi kune vashandisi vane wachi 38 kana 42 mm uye inowanikwa mune maviri mavara, nhema uye tsvuku. Nezve iyo mutengo waro i $ 29,99 uye ndizvozvo inowanika pawebsite yavo Kugadzira, hongu, zvinodhura kune avo vedu vanogara kure neUS. Tichitora mukana wekupemberera kweCES, zvishandiso zvakasiyana uye nhau dzinonakidza dzakatangwa mune izvi, saka tichava takuteerera kwazviri kuti tione nhau dzinonakidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Gumi nemaviriSouth inotangisa yekutanga rundarira kupfeka iyo Apple Watch, iyo ActionSleeve
Dzidza maitiro ekunyarara matabhu muGoogle Chrome yeMac
Kana iwe ukarasikirwa chero neyako maAirPods, neichi chishandiso unogona kuiwana